Kuze kube manje, ukukhiqizwa kwensimbi sekufinyelele ukuphelela. Ifenisha yanamuhla ihlukene kangaka, inhle futhi isebenzayo ukuthi kunzima kakhulu ukukhetha lapho uthenga. Imfenisha evela kubakhiqizi abahamba phambili nabakwamanye amazwe abenza ngokuya ngobuchwepheshe obuphambili futhi inezinga eliphakeme kakhulu lekhwalithi futhi isikhathi eside kakhulu sokusebenza. Imibhede engashadile - nje kuphela isampula yefenisha yobuciko: iyasebenza, ihlelekile, inhle kakhulu futhi ifanele ngokuphelele kunoma yisiphi isitayela sezulu, kusukela e-classical, ngezinhlobonhlobo ezihlukahlukene, kuya kososini, ukucacisa okuqinile kanye nokulinganisa okungaphakathi nokudweba. Imibhede engashadile idinga kakhulu abathengi.
Ukulala okuphephile okuphelele kunokwenzeka kuphela ezimweni ezikhululekile. Ngakho-ke, ukulala kahle, udinga ukulala wedwa. Uma kungekho muntu oqhuma ebusuku, udonsa ingubo, akayikukhahlela ngezinyawo nangezandla, ukulala kuhambisana nokuthula. Imibhangqwana eminingi iphinda ikhethe ukuhlala eMelpheus emibhedeni eyahlukene. Imibhede engashadile ayilona nje elula ukulala okunethezeka, okugcwele, kodwa futhi ehle kakhulu futhi enhle kakhulu. Umklamo wabo ukhululekile kakhulu futhi uhlukene kakhulu, banombala ohlukile wobubala, otholile, okhululekile, ama-mattress omzimba ophinda abuyele wonke umjikelezo womzimba futhi avumele Kakhulu ngangokunokwenzeka ukuze uphumule futhi ube nokuphumula okuhle.
Imibhede engashadile idayiswa ngokwehlukana noma nge-headset. Isitoreji sendawo yokulala ihlanganisa imibhede emibili, amatafula ombhede, ikhabethe lelineni noma amabhabhinethi, ama-ottomani kanye netafula lokugqoka. Ingaphakathi lekamelo lokulala nalolu hlelo lokusebenza oluhlelekile lushintsha ukuze lube ngcono. Ifenisha yekamelo elibukeka lihle kakhulu, lifashini, lihloniphekile, lihle kakhulu, likhazimulayo futhi lifashisa. Nakuba igumbi lokulala liyingcwele, futhi izivakashi aziqhubeki kulo, ifenisha enhle kangaka ayiyona ihlazo futhi ibonise izivakashi zayo. Imibhede engashadile ivulekile ngokwanele ukuze ikhuphuke noma isakaze izandla zayo. Zihlala ziqinile futhi zizinzile, futhi zihambisana nezinye izinto i-headset ihambisana kakhulu futhi ibukeka ngothando.
Imibhede engashadile "Ikea", ephelele ekamelweni lokulala. Zinezinketho ezinhle, eziqinile zokuklanywa, imibala ehlukahlukene, amathebhulazi anethezekile ayenziwe ngendwangu eqinile, yekhwalithi, engagudluli embhedeni wombhede. Ukuqhubeka okunjalo, Ifenisha eyodwa neyodwa ingathengwa emakhasini amawebhusayithi ezitolo zefenisha nezitolo zase-intanethi. Futhi nakuba imodeli ayiyona entsha, ukuklama nokusebenza kwenza kube ngokoqobo into entsha eshaqisayo. Futhi izinzuzo zezempilo zithinteka kakhulu futhi ezingenakunyakaziswa, ngoba induduzo nokulula kwefenisha enjalo kuvumela umuntu ukuba alale kahle, aphumule, abuyisele ukujikeleza kwegazi, alawule izinqubo zokusebenzisa umzimba emzimbeni futhi alondoloze impilo.
Imibhede engashadile, izithombe ezingabonwa lapha, njengawo wonke umuntu. Umklamo wabo wanamuhla, owenzela imfashini nezitayela kanye nokusebenza okuphezulu kuzokwanelisa ukunambitheka okudinga kakhulu.
I-Sofa "i-Baron" (i-accordion) - isipho esihle kakhulu seklasi lomnotho
Max Payne Izidingo 3 System. Izidingo zesistimu Max Payne 3: minimum futhi Kunconywa
Utamatisi e ekhanyayo - isivuno mningi
"Petrovsky" inkundla: ushintsho isithombe ngoba iminyaka eminingana